काठमाण्डौ । लुम्बिनी विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कमालको प्रगति हासिल गरेको छ । कम्पनीले खूद नाफातर्फ ४०२ प्रतिशतको छलाङ मारेको हो । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा १ करोड ६१ लाखमा सीमित रहेकोमा बढेर ८ करोड ११ लाखको उचाईमा पुगेको हो । अघिल्लो वर्ष ६६ लाख संचालन घाटामा रहेकोमा यो वर्ष ११ करोड ५० लाख संचालन नाफा आर्जन गरेको...
काठमाण्डौ । लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिले चिन्तामणि भट्टराईलाई सर्वसम्मत रुपमा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष चुनेको छ । नवनियुक्त अध्यक्ष भट्टराईले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १२७ (२) बमोजिम नेपाल राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीसमक्ष असोज ४ गते बिहीबार पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरे...
काठमाण्डौ । लुम्बिनी विकास बैंक लिमटिेडले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को चौथो त्रैमाससम्म ४० करोड १७ लाख बढी खूद नाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा १७ करोड ५० लाख मात्र नाफा कमाएको थियो । यो हिसाबले खूद नाफामा १२९.४९ प्रतिशतको फड्को मारेको देखिएको छ । बैंकले संभावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि छुट्याएको ११ करोड ३४ लाख रकम...
पोखराको छोरेपाटनमा लुम्बिनी बैंकको एटीएम
काठमाण्डौ । लुम्बिनी विकास बैंक लिमीटेडले आफ्नो सेवा बिस्तारको क्रममा पर्यटकीय नगरी पोखराको छोरेपाटन शाखाबाट एटीएम संचालनमा ल्याएको छ । यो एटीएम टर्मिनलमार्फत लुम्बिनी विकास बैंकका ग्राहकहरुका साथै भिसा आबद्ध अन्य बैंक वित्तीय संस्थाका ग्राहकले समेत सहज रुपमा कारोबार गर्न सक्नेछन् । लुम्बिनी विकास बैंकले हाल देशभर रहेका ६५...
काठमाण्डौ । गरिमा विकास बैंक लिमिटेड र लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडबीच आपसमा ‘गरिमा रेमिट’र ‘लुम्बिनी रेमिट’ सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । जेठ ३० गते बुधबार गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुखकार्यकारी अधिकृत गोविन्दप्रसाद ढकाल र लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडकोतर्फबाट कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत...
काठमाण्डौ । देवः विकास बैंकमा डेपुटी सीइओको रुपमा कार्यरत नरेशसिंह बोहोराले त्यहाँ राजीनामा नदिंदै लुम्बिनी विकास बैंकको सीइओ नियुक्त भएका छन् । लुम्बिनी विकास बैंकको जेठ २३ गते सम्पन्न ३०३ औं बोर्ड बैठकले बोहोरालाई सीइओको रुपमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनी सीइओको रुपमा नियुक्त भए पनि कहिलेदेखि जिम्मेवारी सम्हाल्छन्...
काठमाण्डौ । लुम्बिनी विकास बैंकका नवनियुक्त अध्यक्ष अशोकराज पाण्डेले नेपाल राष्टबैंक समक्ष सपथ ग्रहण गरेका छन् । बैंक तथावित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १२७ (२) बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीसमक्ष पाण्डेले जेठ १३ गते आइतबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका हुन् । सो अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंक,...
काठमाण्डौ । मर्जरको क्रममा भएका अनियमितता र घोटालाहरुको पटाक्षेप हुन थालेपछि र त्यसैका कारण नियामक नेपाल राष्ट्रबैंकले समेत बैंकमा सुपरीवेक्षण र निरीक्षण गर्न थालेपछि लुम्बिनी विकास बैंक छाड्ने लहर चलेको छ । केही दिनअघि व्यक्तिगत कारण देखाउँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झलक खनालले बैंक व्यवस्थापनको नेतृत्वबाट राजीनामा दिएलगत्तै...
बैंकिङ क्षेत्रबाटै विदा लिए झलक खनालले, कारण के होला ?
काठमाण्डौ । संचालकहरुको नाफा बढाउने दवाब थेग्न नसकेर राजीनामा दिने बैंकका सीइओहरुले सूचिमा झलकप्रसाद खनालको नाम पनि थपिएको छ । लुम्बिनी विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कार्यरत खनालले राजीनामा दिएका हुन् । भिबोर विकास बैंकलाई सीइओको रुपमा हाँकेका खनालले मर्जरपछि भिबोर सोसाइटी विकास बैंक र त्यसमा समेत पुनः मर्जर...
लुम्बिनी बैंकको एकैदिन २ शाखा बिस्तार
काठमाण्डौ । लुम्बिनी विकास बैंक लिमीटेडले बैशाख २८ गते शुक्रबारको दिन २ वटा नयाँ शाखा बिस्तार गरेको छ । बैंकले स्याङजाको पुतलीबजार नगरपालिका वडानम्बर ३ बाडखोला र मोरङको बलवारी नगरपालिका वडानम्बर ७ नयाँ बाहुनीमा आफ्ना ६१ र ६२ औं शाखा बिस्तार गरी औपचारिक रुपमा संचालनमा ल्याएको हो । मोरङको नयाँ बाहुनी शाखाको नेपाल राष्ट्रबैंकका...
लुम्बिनी विकास बैंकको कमाल: इपीएसमा वृद्धि, रिजर्बमा छलाङ
काठमाण्डौ । चुक्तापूँजी वृद्धि भई अधिकांश बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई प्रतिसेयर आम्दानीलाई नियन्त्रणमा राख्न धौ धौ परिरहेको बेला लुम्बिनी विकास बैंकले भने आशालाग्दो वित्तीय विवरण पस्किएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासमा यो विकास बैंकले प्रतिसेयर आम्दानीमा वृद्धि भएको रिपोर्ट पस्किएको हो । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा १...
रोयल इन्फिल्ड खरीद गर्दा लुम्बिनी विकास बैंकबाट सहुलियतमा ऋण
काठमाण्डौ । रोयल इन्फिल्ड (बुलेट) मोटरसाइकलको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता विवेक अटोमोबाइल्स प्रा.लि. र लुम्बिनी विकास बैंक लिमीटेडका बीच रोयल इन्फिल्ड मोटरसाइकल नेपाल अधिराज्यभरि फाईनान्स गर्नका लागि मंगलबार एक कार्यक्रमका बीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाली बजारमा ग्राहकहरुमाझ लोकप्रिय र सुरक्षित गन्तब्यको सवारी...
लुम्बिनी बैंक र सूर्या लाइफबीच बैंकासुरेन्स सम्झौता
काठमाण्डौ । लुम्बिनी विकास बैंक लिमीटेडले आफ्ना निक्षेपकर्ता र कर्जाका ग्राहकहरुलाई बैंकमार्फत जीवन बिमाको सेवा समेत उपलब्ध गराउने भएको छ । यही उद्देश्यले यो बै.कले सूूर्या लाईफ इन्स्योरेन्ससँग बैंकासुरेन्स सम्झौता गरेको छ । सम्झौतामा लुम्बिनी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झलकप्रसाद खनाल र सूूर्या लाइफका प्रमुख...
लुम्बिनी विकास बैंकको झूर प्रदर्शन, टप विकास बैंकको यो हविगत
काठमाण्डौ । विभिन्न विकास बैंक र फाइनान्स मर्ज गरी बनेको लुम्बिनी विकास बैंक लिमीटेडले चालुु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा झूर प्रदर्शन गरेको छ । यो बैंकले समीक्षा अवधिमा १ करोड ६१ लाख मात्र खूद नाफा कमाएको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा बैंकले ३ करोड ३४ लाख नाफा आर्जन गरेको थियो । बैंकको खूद ब्याज आम्दानी पनि घटेको छ । अघिल्लो वर्ष...
काठमाण्डौ । विभिन्न बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले जागिरको बग्रेल्ती अफर खुलाएका छन् । बुधबार एक वाणिज्य बैंक, २ विकास बैंक र १ माइक्रोफाइनान्स कम्पनीले दर्जनौका लागि जागिरको अवसर खुलाएका छन् । एनआइसी एशिया बैंकले काठमाण्डौ र बाहिरका शाखा कार्यालयका लागि केही ब्राञ्च म्यानेजर, केही सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट र केही...